Iiprojekthi ze-DIY zokuphinda zisetyenziselwe ukudlala iCD / iDVD-Ikkaro
yokuqalisa >> Ukurisayikilisha i-elektroniki kunye noomatshini kweembiza >> Iiprojekthi ze-DIY zokuphinda zisetyenziselwe ukudlala iCD / iDVD player
Iiprojekthi ze-DIY zokuphinda zisetyenziselwe ukudlala iCD / iDVD player
Namhlanje kuqhelekile ukuba ekhaya abadlali CD endala okanye iiDVD esingasazisebenzisiyo kwaye zilungile Umthombo wehardware iiprojekthi zethu ze-DIY.
Ndizakuqhaqha isidlali seCD ukuze ndibone iziqwenga esinokuthi sisebenzise ithuba kwaye ndishiya uluhlu lweeprojekthi ezinomdla kakhulu (ezinokufundiseka) ezinokwenziwa ngeqhekeza ngalinye. Amakhonkco ziiprojekthi ngesiNgesi, kodwa kancinci kancinci ndiza kuzama ukuzenza kwakhona kwaye ndishiye onke amaxwebhu ngeSpanish.
Le modeli indala kakhulu. Ndicinga ukuba iyasebenza, kodwa kuba ndine-3 okanye 4 ngaphezulu kuye kwancanywa eli nqaku :)
Hlanganisa, uphinde uphinde uphinde usebenzise i-CD / iDVD
Phambi kokuba uphambane yonke into iphuma ngaphandle kokunyanzelwa, Ke ukuba kukho naliphi na icandelo ongenakukususa kungenxa yokuba awuzisusanga zonke izikrufu kunye / okanye iithebhu. Sukwenza iigusha ngokukrazula iziqwenga.
Ndiyifundile kwaye ndiyayamkela imigaqo kunye neemeko
Wushiye lo mhlaba ungenanto ukuba ungumntu:
Saqala ukuyivula ngononophelo. Ayenzi ngqondo kakhulu ukukunika imiyalelo yendlela yokuyivula, kuba imodeli nganye yenziwa ngendlela eyahlukileyo. Le yeza neethebhu ezincinci ezi-3, ezakhe zahamba, zavumela esinye sezigquma zealuminium ukuba zihambe.
Kwaye ixesha ngumcimbi we susa ngokuzolileyo iziqwenga de sifike kwindawo yangaphakathi enomdla.
Musa ukulahla izikrufu, ungalahli nto. Gcina ukuba sinokuphinda sisebenzise yonke into ;-)
Apha sele siyayixabisa i-laser kunye imoto engenabhrashi ephethe ukujikeleza iCD. Siyaqhubeka nokususa izikrufu kumacala, ukuze sikwazi ukufikelela kwizicucu kakuhle. Ngokukhawuleza kangangoko sinako, siya kwahlulahlula kwibhodi ye-elektroniki.
Akukho nto yokuhlaziya. Sizogcina iplate ngoku, Andishiyanga naliphi na ikhonkco ukuze ndiphinde ndilisebenzise. Okwangoku kwenzeka kum ukuba ndisuse izinto zokuphinda ndizisebenzise, ​​nangona zonke ezo zi-SMD ke kunzima kakhulu ukuzisebenzisa. Ndiyayithanda iinyawo ezinamanqatha zobomi.
Ukuqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqha uze udibanise inxalenye enomdla yomfundi, ndiyicacisa umfanekiso ngakumbi
Inkqubo yokususa i-CDJonga ezantsi ekunene yimoto encinci esiza kuyibona ngoku ngasemva.
Inkqubo yokubeka indawo yeLaser (Isifundo sisishiyile apha, kuba bendilindele inyathelo ngenyathelo ngesikrufu esiqhotyoshelweyo)
Ukuba oku sikubona ngasemva
Sinenxalenye entsha, inombolo yesi-5, eyimoto eyenza ukuba inkqubo yokuvula ye-CD isebenze, i-6,7 kunye ne-8 zi-brushless, i-laser kunye nemoto ngasemva.
Ewe, ukuba ufuna icace gca
Singaqhubeka nokudiliza. Kungenxa yokuba oku akumi ndawo, nangona kunjalo sinako Ukuqhawula i-laser, i-brushless kunye nesakhiwo sonke sokubeka, kodwa andizukuya kude kube ngoku kwaye ndiza kushiya amaqhekeza apheleleyo, yile nto sizakuyidinga kwiiprojekthi ezicetyiswayo
Iiprojekthi ze-DIY ezinamalungu e-CD / DVD player ehlaziyiweyo
Kwaye ngoku ubukulindile, ezo Iiprojekthi ze-DIY zokwenza ngamacandelo okufunda. Ewe, ezinye iiprojekthi zifuna iziqwenga ezongezelelweyo, ayisiyiyo kuphela kumfundi, umzekelo, kulula ukuba uyidinge Ibhodi yeArduino, okanye indlela ye-3 CD / DVD Kwaye ukuba uza kwenza umshicileli we-mini-3D, uyakufuna i-extruder kunjalo.
Kulungile, ndichithe ukuchitha kwaye sinengxaki yokuba akukho nyathelo ngenyathelo, kodwa bona ukuba ungenza ntoni ngezi ziqwenga kunye nolwakhiwo.
I-3D Yomntu Ohluphekileyo
Ipocket laser engraver
Iphrinta evela kumfundi weCD
Kunye Brushles iimoto
Ukuqhuba i-brushless, akwanele ukuyidibanisa nombane kunye ne-DC motor, siya kudinga abanye abaqhubi ukuyenza isebenze ngokufanelekileyo.
IArduino CDROM BLDC yoMqhubi weZithuthi
Kuqhelekile ukwenza i-anemometer. Ndishiya ndilinde ukukhulula i-brushless kwaye ndibone izinto ezininzi ezinomdla malunga nolu hlobo lweemoto.
Kunye motor stepper
Ewe, njengoko benditshilo, bendilindele ukufumana iimoto ezihambayo njengale uza kuyibona kwizifundo, ngesikrufu esingenasiphelo esiqhotyoshelweyo, ndiyathemba ukuba unethamsanqa elingaphezulu kwam, hehe
I-Arduino Mini Laser Paper Cutter
Arduino mini ipeni iyelenqe
IMicroSlice | Isinqumli esincinci se-Arduino laser
Lumkela i-laser, amehlo nolusu, inokuba yingozi kakhulu kwaye ibangele umonakalo ongenakulungiswa. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, musa ukwenza ezi projekthi.
Isikhombisi seLaser esenziwe ekhaya
Imodyuli yeLaser yasekhaya
Ngale nto sigqiba ukufunda. "Ndiyathembisa" ukwenza iiprojekthi ezicetyiswayo ngenyathelo ngenyathelo Njengokwesiko eIkaro. Ngaba uyazi ezinye ezinomdla?
Zotero, uMncedisi woPhando lwaBantu
Ungayitshintsha njani indlela yamanzi okugungxula ...
Ukufumana kwakhona ikhompyuter yakudala yeLinux
Ndibuyela kwisiteshi seYouTube ukongeza ulwazi
izigaba Ukurisayikilisha i-elektroniki kunye noomatshini kweembiza Iilebula Ukuba Ukuhamba kwetikiti
Izimvo ezili-13 "ngeeprojekthi ze-DIY zokuphinda zisetyenziselwe ukudlala iCD / iDVD player"
NgoSeptemba 3, 2014 kwi-5: 09 pm
Gut indoda yaseRoomba uyeke abafundi ukusukela kwiminyaka yee-90s!
NgoSeptemba 3, 2014 kwi-5: 13 pm
haha, ndinike ixesha elincinci, ndiza kuligcoba ngeentsuku ezimbalwa :) Masibone ukuba ndingayenza isebenze okanye yintoni. Kodwa ndine4 okanye 5 iiCD okanye iiDVD player kwaye kuya kufuneka uzisebenzise ;-)
NgoSeptemba 12, 2014 kwi-4: 17 pm
Ndilandele eli phepha ixesha elingaziwayo (ixesha elide ngokwaneleyo), ndingathanda
NgoSeptemba 12, 2014 kwi-4: 18 pm
Kudala ndilandela eli phepha ukusuka ekungaziwa igama ixesha elide (lide ngokwaneleyo), ndingathanda ukunceda eli phepha ngokufaka izinto ezenziweyo. Ngaba ungandinika intshayelelo ye-DIY kunye neencwadi zobunjineli? Ndiluhlaza kakhulu kule nto, kodwa ngezimvo ezintle kwaye ndifuna ukufunda, ndicinga ukuba, iya kude! :)
EyeDwarha 28, 2014 ngexesha 2:06 pm
bhetele kuneencwadi ze-DIY okanye i-elektroniki ngokubanzi, ndicinga ukuba kuya kufuneka ujolise kwiiprojekthi ongathanda ukuzenza kwaye ukusuka apho uphande into oyifunayo kwaye ufunde i-elektroniki, ubucukubhede, inkqubo oyifunayo kubo.
Uya kuba nokonwaba ngakumbi kwaye xa ufumanisa ukuba uya kuba yingcali ;-)
NgoNovemba 5, 2014 kwi-12: 04 am
Ndivavanya imoto engenabhrashi kwi-cd yam yenqwelomoya ye-rc, ndiza kubona ukuba ihamba njani, ndiza kukuxelela kamva.
EyoMqungu 8, 2015 e 8:47 pm
Kwaye iqhinga elidala kodwa elothusayo kukusebenzisa ilensi. Ngobungakanani ifana nelensi yokunxibelelana, kwaye kulula ukwahlulahlula ... Kuba lula kwiglasi yokukhulisa okanye imicroscope ukuba incamathele phantse kuye nakweyiphi na ifoto encinci okanye ikhamera yevidiyo, njengekhamera yewebhu, okanye ithebhulethi okanye ifowuni. Zibanzi ngokwaneleyo izinambuzane, jonga ii-mini-worlds apho ungazonwabisa khona ngokufota ...
EyoKwindla 27, 2015 ngexesha 10:50 pm
Ndiwafumana amanqaku akho enomdla kakhulu.
unokuzama ukwenza isiphawuli se-laser
EtiMnga 2, 2015 ngexesha 4:14 am
nceda ndingathanda ukuba uqhube imoto yeBrushles, nceda undicacisele
Mva kwemini, ndiyifundile iposti, kuba ndidibanise abafundi abaninzi kwaye bendifuna ukubona loo modeli, kwaye okoko ndiphosakele istepper motor nge-auger eqhotyoshelweyo, kuya kufuneka ndihlomle ukuba yeyona nto iqhelekileyo, ngokwale ndiyichithileyo , ngaba iyafana naleyo isemfanekisweni, ngelixa uguqa i-floppy drive, uhlala ubafumana bephethe i-auger. Ndiyathemba ukuba xa ushiyekile kwaye ufuna imoto, uyakuyiqinisekisa, kuba ngokubanzi isekwe kumava am uninzi lweeyunithi luyazisebenzisa
UCanzibe 25, 2016 nge-11: 07 pm
Molo, ndinombuzo, andiqondi kangako malunga nehlabathi le-arduino, kuncinci malunga nabaqhubi, ke ndiyabuza ... ndingasebenzisa umqhubi we-pololu a4988 endaweni yabaqhubi abakhankanyiweyo kwiposti? okoko ndifumana isiqingatha sexabiso.
EyoMdumba 23, 2019 ngexesha 12:23 am
Ndinomdla wokuba ndisebenzise kwakhona ii-CD-ROM ukumamela umculo (kunye nokuthumela umqondiso wevidiyo kwiscreen). Ndacinga ukuba ngebhodi yeArduino, ndingayilawula imisebenzi, kodwa andifumananga nto malunga nayo. Wonke umntu endikhe ndambona ethetha ngokuxhobisa abafundi
Agasti 29, 2019 kwi-2: 06 am
Ukudibanisa yonke into yenziwe nangubani na kodwa ukwenza into ngamaqhekeza ngumceli mngeni
1 Hlanganisa, uphinde uphinde uphinde usebenzise i-CD / iDVD
2 Iiprojekthi ze-DIY ezinamalungu e-CD / DVD player ehlaziyiweyo
2.2 Kunye Brushles iimoto
2.3 Kunye motor stepper
2.4 Kunye laser